16 qorshe midab oo ka socda La La Land | Abuurista khadka tooska ah
Isku-darka midabada ayaa noo oggolaanaya Qaado qiyamka HEX si aad ugu dhex gasho shabakad ama app aan ka shaqeyneyno. Haddii aan dooneyno in aan ku xoqno boggaas wax casri ah, waxaan ka heli karnaa nidaam midab ah oo noo oggolaanaya inaan hirgelinno codadkaas si ay astaamaha shabakaddu u noqdaan kuwo isdaba-joog ah oo isticmaalaha booqda webka uu ka helo macnahaas.
Waxaan dhamaantiin idinla wadaagi doonnaa 15 isku-dar ama midabyo midab ah oo laga soo qaaday filim Hollywood ah sida La La Land ama Magaalada Xiddigaha, oo leh midab aad u xiiso badan. Midabkani wuxuu awoodaa inuu xoojiyo muuqaalka jilicsanaanta, jacaylka, murugada ama kalinimada si dhab ah oo macno leh. Waana taas xitaa wuxuu ka helay Oscar sawir qaadista ugu fiican, sida kuwa kale oo badan.
1 Farqiga u dhexeeya casaanka iyo cagaarka
2 Qoob ka ciyaarka qorrax dhaca dhaxanta iyo jaalaha
3 Fogaanta codadka diiran
4 Tuurista midabada qabow iyo cagaarka
5 Qolka midabada dhalaalaya
6 Midabada aasaasiga ah ayaa la wareega
7 Biyaha buluugga ah
8 Nasashada iftiinka
9 Casaan iyo jaalle ku duuban cagaar
10 Habeenkii buluuga ahaa
11 Isku dhawaanshaha violet iyo casaan
12 Xakamaynta kalinimada
14 Kalinimada markale
16 Guduudka iyo mugdiga
Farqiga u dhexeeya casaanka iyo cagaarka
Waxaan horeyba fursad ugu helnay inaan ogaano qorshayaashaan iyo noocyada kala duwan ee midabada ah, markaa waxaan ku bilawnay muuqaal meesha halyeeyga waxaa lagu soo uruuriyaa midabbo isku dhafan si fiican u muuji iyo isbarbardhig.
Qoob ka ciyaarka qorrax dhaca dhaxanta iyo jaalaha
La La Land waxay awood u leedahay inay ku qanciso ciyaarta weyn ee midabada mid kasta oo ka mid ah muuqaalkeeda. Tan dhexdeeda huruud iyo cadaan isku badalaya cirro waxay qaataan dhammaan doorka hoggaamineed si ay naftooda ugu taajiraan dhammaan midabada qabow ee ku hareeraysan.
Fogaanta codadka diiran
Muuqaal kale oo awood leh halka ay ka muuqato Sebastian oo gabbaad ka dhiganaya biyaano Aroos meesha qoraaladaadu ku dhigayaan midabka oo dhan. Muuqaalkani wuxuu helayaa masaafada udhaxeysa codadka ugu ifka badan si looga tago kuwa ugu mugdsan dhexda dhexe.
Tuurista midabada qabow iyo cagaarka
Waqti muhiim u ah Mia oo ay miyirka ku soo qaadan karto iyo xasilloonida nasashadaas la qaato ka hor intaanad gelin shubista. Cagaar iyo casaan ayaa kahortaga sawirka intiisa kale. Iftiinka daaqadda laga soo galo ayaa awood u leh inuu daqiiqaddaas kacsan neefsado.
Qolka midabada dhalaalaya
Freshness of the unknown, sugitaanka maxaa way ku taaban kartaa adiga iyo dumarka dhamaan nuxurkeeda qaybtaas hore ee filimka, waxay hordhac u tahay xafladda. Midabada dhalaalaya ee ka soo horjeedka casaanka iyo violets waxay bixiyaan muuqaal neerfis ah, oo ku habboon lahjad jacayl ah sida La La Land.
Midabada aasaasiga ah ayaa la wareega
Dumarku way wada duuban yihiin tamartooda oo leh midabada koowaad oo lagu daray cagaarkaas la socda muuqaalka habeenka cid kale mooyee Mia saaxiibbadeeda iyo nafteeda. Midabyo muuqaal ah ayaa ku soo noqonaya nidaamkan midabka ah ee aad rabto inaad ku qabato dareenka daawadayaasha ama isticmaaleha degay degelkeena.
Biyaha buluugga ah
Muuqaal ay Mia iyo Sebastian ku dheelayaan sawir kaas oo midabka buluugga ahi wuxuu qaataa marxaladda dhexe, oo lagu daray taxane cagaaran cagaaran iyo kuwa casaanka iyo casaanka ah ee ku badan filimka Hollywood-ka oo dhan.
Biyaano, Sebastian, muusigga iyo nalalka macaan ee dhinaca ka soo galaya daaqadda weyn. Codadka jilicsan, oo lagu daray midab bunni ah iyo midab buluug ah oo u muuqda mid xariif ah si loo sameeyo midabyo taxane ah oo nasanaya isla markaana sharaf siinaya xilligaas dhow iyo tan shaqsiyeed.
Casaan iyo jaalle ku duuban cagaar
Waxaa jira wax ku jira tallaalkan oo awood u leh inuu isku milmo sidaas cagaar waa isku xirka jaallaha iyo casaankaas inay awood u leeyihiin inay abuuraan jacaylka ugu nadiifsan. Taxane taxane ah oo isku dhafan si loo muujiyo naqshadeynta websaydhka goobta sida mid la xidhiidha moodada.
Habeenkii buluuga ahaa
Magaalada Xiddigaha waxay ku guuleysteen abaalmarinta Oscar filimka filimada ugu fiican wax uun. Isku dhafka tones buluugga ah oo leh dhammeystir kala duwan, waxay nagu hogaaminayaan nidaam midab ku habboon xarrago.
Isku dhawaanshaha violet iyo casaan
Pink waa mid kale oo ka mid ah halyeeyada kaas oo maraya looxyada filimkan Damien Chazelle. Halkan pinks iyo violets waxay ku midoobaan inay na tusaan isku dhawaanshaha jacaylka ay sheegtaan Mia iyo Sebastian. Hooska ugufiican ayaa ah midka bixiya isbarbardhiga lagama maarmaanka u ah isku dheelitirka nidaamka midabka.
Waxaan arki karnaa in markasta oo Sebastian uu la soo muuqdo biyanihiisa iyo kelinimadiisa, midabada qabow iyo midabyo jilicsan oo jilicsan waxay diiradda saarayaan inay si fiican ugu dhex milmaan midabka buniga ah ee doorkiisa si aad u wanaagsan uga shaqeeya nidaamkan midabka ah.
Muuqaalkan waxaa lagu gaadhay cagaar iyo codad fudud. Jaale la’aan ma jirto iyo Waxaad arkaysaa jaakada jilaaga weyn kaas oo si fiican ugu dhex milma deegaanka oo dhan. Jaale waa qayb ka mid ah habka sixirka ee muuqaalkan.
Muuqaal kale oo ina xusuusinaya qorshe midab kale oo filim-sameeyaha u soo laabanayo si uu u qaato daqiiqaddaas oo sariirta, nalka iyo hooska dhaadheer ayaa indha indheysa ee daawade.
Mia wuxuu nagu daboolayaa midabka guduudan ee timaheeda, midabka indhaheeda iyo buluug daciif ah oo goonideeda ah. Muuqaal deggan oo u dhexeeya labada halyeeyo oo isu beddelaya cibaado. Nidaam midab leh oo dejinaya aragtida wejiga xoogga intiisa kale ee weli la arki doono.
Guduudka iyo mugdiga
Sebastian qaado biyaano si aad markan isku hareereyso iyadoo daawadayaal ah, laakiin leh codad madow oo casaan iyo guduud ah. Waa dharkiisa midabkiisu bunni yahay oo barta dhexe qaadanaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » 16 isku dhafan midab leh oo laga soo qaaday sawir qaali ah La La Land